Ilmaha iyo dhibaatada | Suomen Mielenterveysseura
Waxaa laga yaabaa in ilmuhu uusan u muujinin naxdintiisa sida waalidka, sidaas awgeed waxaa laga yaabaa in waalidka ama qofka kale ee qaraabada ah in ay ku adkaato in ay ogaadaan sida ilmuhu u dareemayaan dhibaatada. Badanaa caruurtu sida dadka waaweyn ayey u dareemaan dhibaatada naxdinta leh, sida in la dareemo meel la’aan, jahawareer, caloolxumo, caro iyo in la qaadan waayo sida wax u dhaceen. Marka ay jiraan arimo adag oo xoog badan ka qaadaya caruurta, waxaa muhiim ah in caruurtu ay helaan wehelka iyo kaalmada qofka weyn.
Ku soco jadwalka
Xiligga dhibaatada ilmuhu wuxuu u baahanyahay dareen nabadgelyo iyo jadwal. Si hadaba loo soo celiyo dareenka xaalad nabadgelyo waxaa muhiim ah in lagu socdo jadwalkii hore sida xiligga wax la cunayo ama la seexanayo sidoo kale in si caadi ah loo sii wado hiwaayada caruurta, haddii ay meel aadi jireen. Intaas waxaa dheer in ilmuhu u baahanyahay in lala joogo oo loo wehel-yeelo.
Ka jawaab su’aalaha caruurta ee la xiriira dhibaatada (adigoo xusuusan da’da ilmaha)
Waxaa loo baahanyahay in ilmaha lagala hadlo wixii sababay dhibaatada loona cadeeyo waxa dhacay, wixii si khaldan uu u fahmayna waa in laga saxo. Markaad ilmaha la hadleyso uma baahna inaad isticmaasho erayo dahsoon ama uusan fahmi karin, sida haddii aad ka hadleyso qof dhintay inaad tiraa qofkaas jiif-dheer ayuu aaday. Waxaa laga yaabaa in ilmuhu uusan fahmin erayada dahsoon, uuna ka cabsado jiifka ama uu u maleeyo in qof dhintay uu soo noqonayo.
Waxaa loo baahanyahay in su’aalaha ilmaha looga jawaabo si dhab ah, adigoo xusuusan da’da ilmaha. Ilmaha waad waydiin kartaa, sida uu u dareemayo dhacdada isla markaasna u sheeg in haddii uu dareemo in dadka waaweyn aysan caadi ahayn in arrintaasi ay sabab u tahay murugada. Marka ilmaha loo qeexo sababta dadka waaweyn ay u ooyayaan ama ay dareenkooda murugada u muujinayaan, markaas ilmuhu wuxuu fahmayaa in dareenkiisa uu muujin karo. Waxaa fiican in ilmaha lagu dhiirigaliyo inuu ku waydiin karo wixii uu rabo inuu wax ka ogaado ee maskaxdiisa ku soo dhaca.
Ogolow dareemada kala duwan iyo muujintooda
Waxaa fiican in ilmaha loo sheego iney caadi tahay in dadku u dareemaan dhibaatada naxdinta leh siyaabo kala duwan. Sidoo kale waxaa ilmaha loo sheegi karaa, in qofka maskaxdiisa ay ku soo dhacayaan dareemo aan caadi ahayn qofkuna uu dareemayo sidii hore si ka duwan. Waxaa kale oo loo sheegi karaa in dareenka aan caadiga ahayn uu la xiriiro dhacdada, in xakameynta dareenku uu yahay mid xanuun leh laakiin ay tahay lagama maar-maan. Waxaa fiican in ilmuhu maqlo in qofku marna la kulmo murugo marna farxad.
Waxaa dhici karta in ilmuhu muujiyo dareen xataa waqti badan dhacdada kadib. Dhibaatada soo derista ilmaha waxay ka muuqan kartaa waxbarashada ilmaha oo hoos u dhacda ama degenaan la’aan xiligga waxbarashada. Waxaa fiican in xaaladahaas lagala hadlo macalimiinta.
Badanaa arrimaha dhibaatada leh ilmuhu wuxuu ku muujiyaa ciyaartiisa. Haddii xiligga waxbarashada aysan muuqan in arrinta laga hadlo, qofka wayn ee ilmaha ka agdhaw ayuu la ciyaari karaa si dareenkiisa uu u muujiyo. Tusaale in la qoro wixii dhacdada maalinta, in sawiro la qaado, in wax la sawiro ama in ciyaar kale la sameeyo waxay fududeynayaan dareenka ilmaha ee dhibaatada.